स्वास्थ्य / जिवनशैली – Yuwa Aawaj
Posted in स्वास्थ्य / जिवनशैली
तपाईको घर वरपर लाजवती को विरुवा छ भने अब यी कुरा पनि जानीराखौ ला”जवति यसबाट यति धेरै फाइदा हुन्छ र यी रोग भएकालाई समेत अचुक औषधि पनि बन्छ । लज्जाबति झारलाई लाजवंती वा लाजमान्ने झारको नामले पनि चिनिन्छ। यसको बनस्पतिक नाम भने माईमोसा पुदिका हो। हात वा अन्य कुनै बस्तुले छुने बित्तिकै यसको पात ओइलाएर बन्द हुने हुनाले यसलाई लाजवन्ति झार भनिएको हो । गाउँघरतिर यसलाई गाइबस्तुको घाँसको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ।यस बाहेक यसलाई जडिबुटि वा औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अभुमका हर्बल प्रा लि अहमदाबादका डाइरेक्टर डा दीपक आचार्य यहि झारको औषधिय गुणको बारेमा बिगत १५ बर्षदेखि भारतको बिभिन्न क्षेत्रमा रहेर अध्ययन गरिरहेका छन् । भारतको सुदूर आदिवासी अंचल जस्तै पातालकोट (मध्यप्रदेश), डांग (गुजरात) र अरावली (राजस्थान)का आदिवासिहरुले कसरि परम्परागत रुपबाट यसलाई औषधिको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छ
गाउँमै पाइने दूधे झारका यति धेरै चमत्कारी फाइदा यस्ता ५ रोगको औषधिय गुण !
काठमाडौँ : गाउँमै पाइने दूधे झार का यति धेरै चमत्कारी फाइदा सामान्य जरो देखि ठूलो रोग पनि हुन्छ निको । अहिले मानिसहरु चिकित्स उपचार पद्धतिमा मात्र भर नपरी आयु'र्वेदिक पद्धतिइ पनि अगालिरहेका छन्। किन भने चिकित्सा पद्धतिका धरै साइड इफेट रहेको हुन्छ त्यसैले बजारमा अहिले थुपै जडिबुटी औषधि पाइने गर्दछन। आज हामी तपाइलाई हाम्रो वरपर पाइने दुधे झारको बारेमा हामी चर्चा गछौ। जुन झारको प्रयोगबाट थुपै रोगको उ'पचार गर्न सकिन्छ। दुधे झार सेतो दुध जस्तो रस निस्कने काण्ड भएको पोथ्रा वर्गमा पर्ने औष'धीय गुण भएको वनस्पति हो। यसलाई नेपालीमा दुधे झार, अंग्रेजीमा कमन स्पर्ज भनिन्छ। यसको बिरुवालाई ‘आस्थमा प्लान्ट’ भन्ने गर्दछ। किनकि यो दम रोग (आस्थमा) को घरेलु उप'चारमा प्रयोग हुन्छ। उक्त बिरुवामा ट्रा'इटरपेन, फाइटो'स्टेरोल्स्, टा'निन्स्, पोलिफेनोल्स्, फ्ला'भोन्वाइड्स, इसेसि'न्यल आयल, अल्क'ल्वाइड्स, सा
May272021 by Yuwa AawajNo Comments
अक्सिजनको मात्रा राम्रो बनाउन घरमा रोप्नु पर्ने यी साना वनस्पतिहरु बारेमा जानीराख्नुहोस ।
अध्ययनहरुले देखाएको छ, काठमाडौंबासीका लागि पर्याप्त अक्सिजन छैन । अर्थात यो उपत्याकामा यति धेरै वायु प्रदूषण छ कि, सास फेर्नका लागि शुद्ध हावा छैन । काठमाडौंमा मात्र होइन, शहरी क्षेत्र अहिले वायु प्रदूषणको चपेटामा छ । शहरवासीहरुको फोक्सोमा शुद्ध हावा पुग्दैन । जबकी स्वस्थ्य जीवनका लागि स्वस्थ्य खानपान जति आवश्यक छ, त्यो भन्दा बढी शुद्ध हावाको आवश्यक छ । शरीरमा पर्याप्त अक्जिन पुगेन भने शरीरभित्र अनेकौ रोगको संक्रमण हुन्छ । अक्सिजन निशुल्क प्राप्त हुने त्यस्तो औषधी हो, जो हामी क्षणक्षणमै उपभोग गरिहेका हुन्छौ । यद्यपी शहरवासीका लागि यो अपर्याप्त हुँदैछ । कलकारखाना, गाडी र मानव निर्मित चिजका कारण उत्पन्न प्रदूषणले हाम्रो फोक्सो भरिंदैछ । यस्तो अवस्थामा हामीले केही काइदा अपनाउन सकिन्छ । संभव भएसम्म रुख रोप्नुपर्छ । रुख बिरुवा स्यहार्ने, हुर्काउने काममा हामीले पनि सहयोगी भूमिका खेल्
May262021 by Yuwa AawajNo Comments
बद्लिदो जीवनशैली र गलत खानपानको कारण हाम्रो शरीरमा नराम्रो असर परिरहेका हुन्छ । शरीरमा देखापर्ने रोगका निदानका लागि हामी औषधी सेवन गर्छौ, जो बजारमा सहजै उपलब्ध हुन्छ । तर, औषधी सेवनले क्ष'णिक रुपमा हामीलाई रोगबाट छुटकारा दिएपनि त्यसको दीर्घकालिन असर बाँकी रहन्छ । अतः शरीरमा देखापर्ने त्यस्ता रोगलाई प्राकृतिक विधीबाट पनि निर्मूल पार्न सकिन्छ । योग त्यसको सर्बोत्तम बिकल्प हो । १. कम्मर दुख्ने : कारण- माशंपेशी खुम्चिनु, उठ्ने र बस्ने गलत तरिका, सुत्केरीमा धेरै शारीरिक श्रम गर्नु । हलासन – जमिनमा कम्मरको बलमा सुत्ने, दुबै हातलाई जमिनमा राख्ने । – दुबै खुट्टाको पञ्जा मिलाएर राख्ने । – दुबै खुट्टालाई बिस्तारै-बिस्तारै माथि उठाउने र ९० डिग्रीको कोण बनाउँदै टाउकोबाट पछाडितिर लाने । – हातलाई पछाडितर्फ जमिनमा तन्काएर राख्ने । – १-२ मिनेटसम्म यस स्थितीमा रहेर सास लिने एवं छाड्ने । – बिस्ता
May252021 by Yuwa AawajNo Comments
यी खानेकुरा बिर्सेर पनि नराख्नुस् फ्रिजमा, जान्नुहोस ।
जुनसुकै खानेकुरा वा फलफुल फ्रिजमा राखिदिने धेरै गृहणीहरुको बानी हुन्छ । फ्रिजमा राखेका वस्तुहरु सँधै ताजा र स्वच्छ रहन्छन् भन्ने सोचाई हुन्छ, उनीहरुको । तर, सबै वस्तुहरुको हकमा यो लागू हुदैन । कतिपय खानेकुरा र फलफुलहरु फ्रिजमा राख्दा बिग्रिन्छन् र तिनीहरुमा रहेको न्युट्रियन्स कम हुन्छ । हामी यस्ता केही खानेकुराको जानकारी यहाँ दिँदैछौं: टमाटरः फ्रिजमा राख्दा टमाटर भित्रको ‘मेम्ब्रन’ टुट्छ र टमाटर चाँडै गल्छ अनि बिग्रिन्छ । पाउरोटीः फ्रिजभित्रको चिसो तापक्रमले पाउरोटीमा डिहाइड्रेसनको प्रक्रिया छिटो हुन्छ । यसबाट पाउरोटी चाँडै सुक्छ र बिग्रन्छ । अण्डाः धेरै दिनसम्म अण्डालाई फ्रिजमा राख्दा यसको योक सुक्छ र न्युट्रियन्स कम हुन सक्छ । केराः यसबाट इथाइलिन ग्यास निस्किन्छ जसले आसपासका फलहरुलाई चाँडै पकाइदिन्छ । निबुवा र सुन्तलाः यसमा साइट्र एसिड हुन्छ, त्यसैले फ्रिजभित्रको चिसो सहन सक्दै
लसुन र महको मिसाएर खनुको यति धेरै फाइदाहरु थाहा पाउनुहोस ।(विधि सहित)
स्वास्थ्य : लसुन र मह दुबै प्राकृतिक गुणले भरिपूर्ण हुन्छ । यदि दुबैलाई मिश्रण गरेर सेवन गर्ने हो भने, कतिपय रोगको समेत निदा'न गर्न सहयोग गर्छ । लसुन मसलेदार खानालाई स्वादिष्ट बनाउन प्रयोग गरिन्छ । त्यसो त यसको औष'धिय महत्व पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यस्तै मह जति स्वादिलो हुन्छ, उत्तिनै लाभदायक पनि । यसले सौन्दर्य बढाउनमा खास सहयोग गर्छ । मह र लसुनको मिश्रण खानाले मुटुको धमनीमा जमेको वोसो निक्लन्छ । जसले गर्दा रक्त प्रवाह राम्ररी हुन पाउँछ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनदेखि जाडोमा हुने दुखाईबाट छुटकारा पाउन पनि यसको मिश्रण उपयोगी हुन्छ । कसरी बनाउने मिश्रण ? : यसका लागि २ वा ३ ठूलो केस्रा लसुनलाई हल्का दबाएर कुट्ने । त्यसमा शुद्ध मह मलिाउने । यस मिश्रणलाई त्यसबेला सम्म राख्नुपर्छ, जबसम्म लसुनमा राम्ररी मह मिश्रण हुदैन । अब यसरी तयार भएको लसुनलाई बिहान खाली पेट सात दिनसम्म खानुपर
May152021 by Yuwa AawajNo Comments
हाम्राे घर आंगनमै पाइने घ्यूकुमारीकाे फाइदाहरु र औषधिय गुण, थाहा पाउनुहोस ।
स्वास्थ्य : घिउ कुमारी सर्व गुणकारी मानवहीतमा प्रकृतिले दिएको बरदान यसलाई आयुर्वेदमा संजिवनी मानिन्छ । छालाको सुरक्षादेखि कपालको सौन्दर्यता र घाउँ भर्ने समेतको कार्य यसबाट हुने गर्दछ । एलोवेराको जुस नियमित पिउने व्यक्ति कहिल्यै विमार रहन्न । जोड्नी दुखेमा रक्तसंचारको रुपमा एलोवेरालाई बेजोड् मानिन्छ । एलोवेराले कपाल चुडिनबाट जोगाउँने तथा कपाललाई सेतो हुनबाट रोक्ने गर्दछ । दैनिकरुपमा सुत्नुभन्दा अगाडी गोडामा लगाएमा गोडा फुट्नबाट बचाउँछ । यस्ले छालाको नरमपनलाई कायम राख्दछ । औषधिउपचार १. आँखाको रोगमा आँखाको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदीमा राम्रो बेसार फिटेर मनतातो पारी आखाँमा राती सुत्ने बेलामा बाँध्नाले आँखाको सम्पूर्ण रोग निको हुन्छ । २. कानको रोगमा कानको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदी मनतातो पारेर २\_३ थोपा दाहिने कान दुखोमा देब्रे कानमा र देब्रे कान दुखेमा दाहिन कानमा हाल्ने र दुबै
May112021 by Yuwa AawajNo Comments
जीवनभर खुसी रहनका लागि यी कामहरु गर्नुहोस
मानिसहरु खुसी प्राप्तिका लागि हर समय हर प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् । खुसीले नै प्राणीमा सकारात्मक सोच र आत्मविश्वास बढाइदिन्छ । यो एउटा शक्ति हो । यसले मनलाई प्रभावित गर्छ र मनभित्र आभास गराइदिन्छ । जसको कारण मानिस लगायत अन्य प्राणीहरु पनि आनन्दित र सन्तुष्टि महसुस गर्छन् । मानिस खुशीको खोजीमा यसरी दौडिरहेको हुन्छ, जसरी मृग कस्तुरीको खोजीमा भौतारिन्छन् । तर त्यो खुशी अन्त कतै नभएर आफूभित्र लुकेर बसेको हुन्छ । रामभक्त हनुमानले शायद सञ्जीवनी बुटी चिनेको भए त्यति ठूलो पहाड बोक्नु पर्ने थिएन होला । जुन मानिसले आफूभित्र खुसी पहिचान गर्न सक्दछ त्यही मानिसले मात्र आनन्दको जीवन बिताउन सक्दछ । कतिपय मानिसमा सबैकुराले सम्पन्न हुँदा हुँदै पनि खुसी रहन सक्दैन । त्यसको प्रमुख कारण हो असन्तुष्टि । जबसम्म आत्मसन्तुष्टि मिल्दैन तबसम्म मानिस खुसी रहन सक्दैन । खुसी न मागेर पाइन्छ न त किन्न नै ।
कुनैपनि पाठ वा पुस्तक पढेपछि त्यसलाई हामी कति लामो समयसम्म स्मरण गर्न सक्छौं ? यो मान्छेको आफ्नो क्षमतामा भर पर्छ । साथसाथै उसले कसरी सो पाठ पढेको छ वा पढ्ने विधी अपनाएको छ भन्ने कुराले पनि यसमा अर्थ राख्छ । जबकी हामीमध्ये धेरैले सही ढंगको पठन विधी अपनाइरहेका हुँदैनौं । शिक्षक वा आमाबुवाले पनि सही ढंगले पढाउन वा बुझाउन सकिरहेका हुँदैनन् । कसरी पढ्दा त्यसलाई सजिलो ढंगले स्मरण गर्न सकिन्छ ? सही विधी के हो ? पढेको पाठलाई राम्ररी स्म'रण गर्नका लागि अनेक विधी खोजिएको छ ।बम''नोविज्ञानको एक प्रख्यात पत्रिकाले पढ्ने सहि र गलत तरिकाको बारेमा परि'क्षण गरेको छ । दोहो¥याएर पढौं तपाईं नयाँ शब्द सिक्ने कोसिस गरिरहनुभएको छ भने धेरैले अपनाउने सबैभन्दा आम रणनी'ति हो मुखमा न'झु'ण्डिएसम्म रटा'न लगाएर घोक्ने । तर, मनोवै'ज्ञानिक यो तरिका ठिक होइन । रटान लगाएपनि हाम्रो दिमागले यी कुराहरुलाई सुरक्
May102021 by Yuwa AawajNo Comments
मानिसको आयु यी ५ कारणहरुले गर्दा घट्ने गर्दछ, जान्नुहोस ।
हामी तपाइँहरुलाई सधै प्रेरणादायी कुराहरु दिने गरेका छौ । प्रेरक भनाईहरु, मनछुने लाईनहरु, जीवनशैली, व्यक्तित्व विकास र साथ् साथै सुन्दर जीवनको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारीहरु पनि पस्किने गरेका छौ । आशा छ हाम्रो यी जानकारीहरुले तपाइँहरुलाई केहि न केहि सहयोग अवश्य पनि पुर्याइरहेको छ । आज पनि हामीले यहाँ तपाइँहरु माझ एउटा जानकारीमुलक कुरा लिएर आइसकेका छौ । हामी निश्चित आयु लिएर जन्मन्छौं । जन्मेपछि मर्नैपर्छ । तर, हामीले जन्मजात जति आयु लिएर आएका हुन्छौ, त्यसको पुरा अवधी बाँच्न पाउँदैनौ । सक्दैनौं किनभने जीवन जिउने क्रममा हामीलाई अनेकन रोग लाग्छ । अनेकन शारीरिक, मानसिक झन्झट आइलाग्छ । यस्ता विकारले हाम्रो आयु खियाइदिन्छ । जीवनको उत्तरार्द्ध रोगले थलिएर, जीर्ण भएर कष्टकर जीवन बाँच्छौं । हरेक ब्यक्तिको जन्मपछि मृत्यु निश्चित हुन्छ । जन्मसँगै मृत्युसँगै आउँछ । शास्त्रमा मानिसको आयु घट